देश प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निजी सम्पत्ति होइन – डा. गोविन्द केसी – Interview Nepal
देश प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निजी सम्पत्ति होइन – डा. गोविन्द केसी
डा. केसीको विज्ञप्ति :
स्मरण रहोस् यो देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निजी सम्पत्ति हैन । यसै गरी कुनै बेला देशलाई आफ्नो सम्पत्ति सम्झेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागरिकले कसरी थान्को लगाए, त्यो कसैले नबिर्से हुन्छ । अहिलेको संविधान पनि सर्वसाधारणले रगत र पसिना बगाएर, प्राण अर्पेर ल्याएका हुन्, नेताहरुको चोंचोमोंचो र गठजोडले गणतन्त्र स्थापना भएको हैन । त्यसैले यो संविधानलाई आफ्नो स्वार्थको फुटबल बनाउनेहरुलाई कुनै पनि हालतमा त्यस्तो कुकर्मका लागि दण्डित गर्नु पनि हाम्रो नागरिक कर्तव्य हुन्छ ।
Posted in ब्यानर समाचार 2, मुख्य समाचार, राजनिती, समाज